Professional Brand တစ်ခု ဘယ်လိုတည်ဆောက်မလဲ? • Brand You Academy
Being Professional: Preparing Ourselves for Success ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့ 2017 Business and Success Summit မှာ ပြောဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ Professional ဆိုတဲ့စကားလုံးကို ဒီခေတ်မှာ အလွန်သုံးကြပါတယ်။ ဒီလူက Pro ဖြစ်တယ်။ Pro ဆန်တယ် စသဖြင့် အသိအမှတ်ပြုတဲ့အနေနဲ့ ပြောလေ့ရှိသလို Pro မဆန်ဘူးဆိုပြီးလည်း ရှုံ့ချလေ့ရှိပါတယ်။
Pro ဆန်တယ် (Professional ကျကျ အလုပ်လုပ်တယ်) ဆိုတဲ့ Professional Brand ကို ပိုင်ဆိုင်ထားသူဟာ ဘယ်နေရာရောက်ရောက် အများရဲ့ ယုံကြည်မှု ရပါတယ်။ အလုပ်တာဝန်ပေးခြင်း ခံရပါတယ်။ တလေးတစား ဆက်ဆံနေရာပေးခြင်းခံရပါတယ်။
ကုန်ပစ္စည်းတစ်ခုမှာ Brand ရှိသလို လူမှာလည်း Brand ရှိပါတယ်။ ရွေးချယ်ခွင့်သာ ရမယ်ဆိုရင် ကောင်းတဲ့ Brand ပဲဖြစ်ချင်၊ လိုချင်ရတာ သဘာဝပါ။ အဲဒီလို ကိုယ့်ရဲ့ Brand ကောင်း၊ နာမည်ကောင်းကို တည်ဆောက်လိုသူတွေအတွက် Professional ကျချင်သူတွေအတွက် အခြေခံအချက်လေးတွေကို ပြောပြချင်ပါတယ်။
Professional Brand တစ်ခုတည်ဆောက်ဖို့ ဘာတွေလိုအပ်လဲ?
လူတစ်ယောက်အနေနဲ့ Professional Brand ကောင်းကောင်းတစ်ခုတည်ဆောက်ဖို့ ပထမဆုံးလိုအပ်တာက
– Appearance (ပြင်ပပုံပန်းသွင်ပြင်)
– Behaviour (အပြုအမူ)
– Communication (ဆက်သွယ်ခြင်း)
– Knowledge (အသိပညာ ဗဟုသုတ)
– Skills (ကျွမ်းကျင်မှု)
– Abilities (စွမ်းဆောင်ရည်) တို့ပါ။
Knowledge, Skills, Abilities လို့ဆိုတဲ့နေရာမှာ တလောကလုံးက ဗဟုသုတတွေကို သိနေစရာမလိုသလို နယ်ပယ်တိုင်းမှာ ကျွမ်းကျင်မှုရှိဖို့လည်း မလိုပါဘူး။ ကိုယ်နဲ့ သက်ဆိုင်တဲ့နယ်ပယ်၊ ကိုယ်ဇောက်ချလုပ်ကိုယ်တော့မယ်ဆိုတဲ့ နယ်ပယ်မှာတော့ ကိုယ့်နာမည်ထွက်လာအောင်၊ ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ဖြင့် ကောင်းတယ်၊ တော်တယ်၊ ကိုယ်ကျင့်သိက္ခာရှိတယ်၊ ယုံကြည်စိတ်ချရတယ်ဆိုတဲ့ Brand ကို တည်ဆောက်ထားသင့်ပါတယ်။
ဒီလို အခြေခံအချက်တွေအပြင် ထပ်ပြီးပေါင်းထည့်ဖို့လိုအပ်တာတွေက
– Integrity (ကိုယ်ကျင့်တရား)
– Responsibility (တာဝန်ယူမှု)
– Self-Mastery (မိမိကိုယ်ကို ကောင်းစွာတည်ဆောက်နိုင်ခြင်း) တို့ဖြစ်ပါတယ်။
ဒါလေးတွေကို သတိထားပြီး တည်ဆောက်မယ်ဆိုရင် ကိုယ့်ရဲ့ နာမည်၊ Image နဲ့ Brand သည် သူများသတ်မှတ်ချက်အောက်မှာ ပိတ်မနေပဲ၊ ဘောင်မခတ်ပဲ ကိုယ့်ရဲ့ ဘဝနဲ့ကိုက်ညီတဲ့၊ ရည်မှန်းချက်နဲ့ကိုက်ညီတဲ့ Professional Brand ကို ကိုယ်တိုင် ဖန်တီးတည်ဆောက်နိုင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်။
NextHow to look likeaMillion Dollars even if you aren’taMillionaireNext